युवा दिवस : 'किन पछि पर्दैछन मधेशी युवाहरु ?'
यहाँ इन्टरमेडिएट ( २) गर्न आएका युवा, नवयुवकहरुमा पनि कुलतले उत्तिकै प्रभाव पारेको हेर्न सकिन्छ ।
न्यूज ब्यूरो | डेस्क
२७ श्रावण, २०७६ || प्रकाशित ०८:१०:००
भनिन्छ युवा शक्ति राष्ट्रका भविष्य हुन् साथै पहरेदार अनि खम्वा हुन् । आजका युवाले नै भोलि यो देश हाँक्ने हुन् । युवाहरुले देश हाँक्ने र युवा भविष्यको खम्वा हुन् भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन । युवाहरुको सवालमा धरै विश्वविख्यात व्यक्तित्वहरुले विभिन्न धारणाहरु र्सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसै सिलसिलामा विश्व र्सवहारा वर्गका नेता माओले भन्नुभएको छ – "युवाहरु यो संसार तिमीहरुको हो ,हामीहरुको पनि हो फेरि तिमीहरुकै हो । महान व्यक्तित्व माओको यो भनाईवाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि कुनै पनि देशको या राष्ट्रको लागि युवा कति महत्वपूर्ण छन् र हुन्छन् भन्ने कुरा । राज्यले युवाको वारेमा खासै चासो देखाएको छैनन भने युवापिढीलाई ट्रयाकमा ल्याउने उनका अभिभावकले पनि चुकेकै हुन ।"
प्रत्येक वर्ष १२ अगस्तको अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस मनाइन्छ तर के युवाको मूल मर्म र भावलाई नत राज्यले समेटिन सकेको छ नत उनका गुरुवार्थजन (आमावुवा, अभिभावक र गुरुवर) ले नै । युवा नीति बनाउन राज्य पनिअसफल भएकै हो । त्यसैले आज नेपाली युवाहरु असंख्य पीडा लिएर बाँचेका छन् असंख्य समस्याका पहाड लिएर बाँचेका छन् । अनगिन्ति भोगाई लिएर हिँडिरहेका छन् । भद्रगोल परिस्थितिमा गन्तव्यहिन यात्रा गरिरहेका छन् । तर्सथ नेपाली युवाहरुले भोगेका विभिन्न समस्याहरु र तिनका समाधानका बारेमा केही चर्चा शब्दहरु प्रदर्शन गर्नु आज युवा दिवसको आवश्यता महसुस भएको छ ।
तराई मधेशमा खुट्टा तान्ने प्रवृतिका कारण पनि होला की युवाहरु अगाडी बढन ध्यान नदिने र अरुलाई बढन पनि नदिने । जब गाउँ बाहिर हुन्छौं त्यतिबेला आफ्नो गाउँको प्रोमोट गर्ने, ठाउँ भन्दा बाहिर हुँदा ठाउँको प्रोमोट गर्ने विदेशमा हुँदा देशको प्रोमोट गर्ने धारणाको विकास भएपछि देश विकासको नमुना पनि झल्किन्छ ।
नेपाली युवाहरुमा खास गरी मधेशी मूलका युवाहरु अहिले कुलतमा फँस्ने गरेको छ । यसरी भन्दा खेरी नराम्रो लागिरहेको छ तर वास्तविकता पनि यही देखिएको छ । एक अध्ययन अनुसार मधेशी मूलका युवाहरु काठमान्डौं तर्फ अध्ययन अध्ययापनको लागि आउँदा कमै होलान जसले सुलभ र सहज तरिकाले मिहिनेत मात्र गरीकन आफ्नो लक्ष्यमा अडिग बस्न पाएको । अधिकांश भन्दा पनि करिब ७० प्रतिशत मधेशी मूलका युवाहरु बाटो विराएकै हुन । उनीहरुमा लक्ष्यले प्रभाव पार्दासम्म आफ्नो बाटो विराएर गनतव्यलाई ठक्कर हान्दै अन्धकारको बाटो लिन पुगेको देखिएको छ ।
यसरी छर्लंग हेर्दा खेरी तराई मधेशको विभिन्न जिल्लाहरुबाट अध्ययन अध्ययापनको लागि काठामन्डौं आउने युवाहरुमा वातावरणले पनि होलान तर उनीहरुलाई आफ्नो गनतव्य थाहा हुँदैन । यहाँ आएपछि अभिभावकको उत्तिकै चाप र उनले सहन नसक्ने वातावरणको कारण पनि लक्ष्य विराएर जिवनलाई अर्को मोड तर्फ धकेलिन्छ । यहाँ इन्टरमेडिएट ( २) गर्न आएका युवा, नवयुवकहरुमा पनि कुलतले उत्तिकै प्रभाव पारेको हेर्न सकिन्छ ।
किन होला त्यो पनि अनुसन्धानकै विषय हो तर, यहाँ कलेज जानुभन्दा पहिले त्यही युवाहरु क्याफेमा बसेर पहिला चुरोट तान्छ, खाजा खानुपर्ने पैसाले र खाजा खाने बेलामा खाजाको सट्टा उनले चुरोट रोज्छन, त्यसपछि लठ्ठ भएर कलेज जाने कि नजाने भनेर ठम्याउँछ, केही बेरपछि जान मन लागेन भने डेरामा गएर सुत्छन तर कलेज भने जाँदैनन् । युवा दिवसमा युवाहरुमा इनरजेटिक, प्रोगेसिव जस्ता तत्वहरु विद्यमान हुनु जरुरी छ । जो की अहिलेका युवाहरुले त्यसलाई लात्ती हानेर पूर्ण स्वतन्त्रताको मूल मर्मलाई गलत फाईदा उठाउँदै आफ्नो लक्ष्यबाट भटकिँदैछन् ।
अर्को सन्दर्भमा कुरा गर्दा, समाजिक सँजालको गलत प्रयोगमा पनि युवाहरुको चासो उत्तिकै देखिन्छ जसको कारण आज समाजिक सँजालले विकृति पनि निम्त्याएकै हुन । समाजिक सँजालमा दिनभरि समय विताउने युवकले आफ्नो ठाउँ छाडी अन्य ठाउँमा जानुको मूल मर्म पनि विर्सेर अभिभावकलाई पनि दुविधामा राखेका छन् । अभिभावकले अभिभावकत्व भन्दा पनि पैसा कति चाहियो भने विषयमा केन्द्रीत भएकै कारण पनि युवाहरुले कुलत्तलाई अँगालेको देखिएको छ । तर सबै अभिभावक त्यस्तो भने हुँदैनन, त्यस्ता पनि अभिभावक छन जो की आफ्ना सन्तानलाई कुलत के हो भनेर शब्द पनि बुझन दिदैनन् । उनलाई पैसा भन्दा पनि ज्ञान र लक्ष्यतर्फ अग्रर गरिरहेको देखिएको छ ।
खासगरी नेपाली युवाहरुमा मधेशी मूलका युवाहरुले धेरै समस्याको सामना गरी रहेका छन् । राज्यले ती युवाहरुको समस्याप्रति गम्भीर बन्न सकेको छैन । राज्यको यही विभेदकारी नीतिको कारण नेपाली युवाहरु अनगिन्ती पीडाहरु खेप्न बाध्य भएका छन् । नेपाली युवाहरु समस्याको भूङ्ग्रोमा पिल्सन विवश भएका छन् । नेपालमा मधेशी मूलका युवाहरुमा सरकारी जागिर खाने होड र डाक्टर, ईन्जिनीयर बाहेक अरु अध्ययापन हेर्न नसकिने जस्तो प्रवृतिका कारण पनि पछि परेको देखिएको छ ।
मधेशी मूलका युवाहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जोकोही पनि चिकित्साशास्त्रमा एमबिबिएस वा ईन्जिनीयर बन्न खोजिरहेको हुन्छ तर त्यस अनुसारको मिहिनेत चैं गर्न नखोज्ने प्रवृतिका कारण पनि सरकारको कैयौं क्षेत्रमा मधेशी कोटाको सिट खाली रहेको देखिएको छ । पहाडी मूलका युवाहरुले टेक्निकल क्षेत्र रोजेर एडमिनिस्ट्रेटर क्षेत्रमा कामयाबी पनि हाँसिल गरेकै हुन , तर मधेशी युवाहरुमा ४ वर्ष इन्जियरको लागि तयारी गर्ने, आइओएमको तयारी गर्ने र बारम्बार असफल भएपछि साईकलोजीकल डिस्ओर्डर (मनोवैज्ञानिक असर) भएर पनि कुलतमा लाग्ने प्रवृति नै बढेको देखिएको छ । यस युवा दिवसमा यस्तो प्रवृतिको अन्त्यको लागि पनि सरकारले कदम चाल्नु विकल्प छैन ।
विश्वपरिवेशमा जस्तो ढंगले शैक्षिक परिवर्तन भएका छन् त्यसको तुलनामा हाम्रो देशमा शिक्षा नीतिमा परिवर्तन भएको छैन । आज पनि नेपाली युवा तथा विद्यार्थीहरु बहुप्राविधिक तथा बहु आयामिक शिक्षा लिनवाट बञ्चित भएका छन् । परम्परावादी शिक्षाको कारण नेपाली युवाहरुले शिक्षाको माध्यमबाट कुनै पनि सिप सिक्न सकेका छैन । बहु प्राविधिक र बहु आयामिक शिक्षावाट बञ्चित भएकै कारण आज नेपाली युवाहरु पाखुरामा बल ,मनमा जोस जाँगर हुँदा हुँदै पनि चुपचाप बस्न विवश छन् ।
राज्यले पनि शिक्षा नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकेको छैन । यही कारण आज सारा नेपाल् युवा तथा विद्यार्थीहरु बहु प्राविधिक तथा बहुआयामिक शिक्षा लिनवाट बञ्चित भएका छन् । यसकै कारणले असंख्य पीडा भोग्न बाध्य भएका छन् । नेपाली राजनीतिक पार्टीीले पनि बहुप्राविधिक र बहुआयामिक शिक्षा ल्याउन कुनै पहल गरेका छैनन् ।उनीहरुको ध्यान गुलिया र सस्ता नारा लगाएर जनताको भोट बटुलेर सत्ताको कुर्सी बस्ने भन्दा अरु कार्य गर्न चाँहदैनन् ।
त्यस्तै गरी देशमा शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्न अनि शिक्षामा सुधार ल्याउन भनि गठित विभिन्न राजनीतिक पार्टी विद्यार्थी संघहरु पनि शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन पर्छ भन्दै सस्ता नाराहरु लाउनमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नारामा मात्रै उनीहरु त्यस्तो शैक्षिक प्रणालीको वकालत गर्ने गर्दछन् । व्यवहारमा भने उनीहरु त्यस्तो शैक्षिक प्रणालीको निर्माण गर्न असफल भएका छन् । साथै देशमा शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै स्थापना भएका विभिन्न राजनीतिक पार्टीी भातृ संगठन भएर काम गर्ने शैक्षिक संघ तथा संगठनहरु पनि नेपालमा शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्न पर्छ भन्दै तिनै पार्टीीको एकहोरो डम्फू बजाई रहेका छन् । आफ्नो जागिर जोगाउन रआकर्ष ठाँउमा सरुवा बढूवा गराउन लागि परेका छन् । शैक्षिक सुधार र परिवर्तनका कुरालाई केवल मागि खाने भाँडो बनाएका छन् । यसै कारण पनि नेपालमा बहु प्राविधिक तथा बहुआयामिक शिक्षाको स्थापना हुन सकेका छैन । त्यस्तै सरकारले पनि शिक्षामा आवश्यक सुधार ल्याउने खालका कुनै कार्य गर्न सकेको छैन ।
सिँगो नेपाली युवाहरुको अर्को महत्पूर्ण समस्या भनेको बेरोजगारी समस्या हो , लाखौँ युवाहरु स्वदेशमा रोजगारी नपाएर रोजगारीको लागि विदेशिन विवश भएका छन् । अझै लाखौँ युवा काम नपाएर भौतारिएर बसेका छन् । सिरानीमा उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रमाणपत्र राखेर बस्न विवश छन् । हज्जारौँ उर्जाशिल ,गतिशिल ,श्रमशिल युवाहरु विना काम बस्न विवश छन् । उनीहरुले राज्यमा कुनै काम पाउन सकेका छैनन् । देशको सरकार तथा राजनीतिक दल कसैले पनि युवाहरुलाई रोजगारी दिने मामिलामा अग्रसरता देखाएका छैनन् ।
राजनीतिक पार्टी देशमा बेरोजगार समस्या बढाएर बेरोजगार युवाहरुलाई आफ्नो पार्टी प्रवेश गर्राई देशमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न लागेका छन् । राजनीतिको नाममा हुने विभिन्न उच्छृङखल गतिविधिमा निर्दोष युवाहरुलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । र नेपाली युवाहरु एक अर्काको विरुद्वमा लड्न विवश भएका छन् । देश यसरी अस्थिर हुनुको प्रमूख कारण बेरोजगार नै हो यदि राज्यका सबै नागरिक आ आफ्नो काममा व्यस्त हुने हो भने राजनीतिक पार्टीले नेपाली युवालाई राजनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न सक्दैनन् । अत नेपाली युवाहरुको अर्को प्रमूख समस्या भनेको बढ्दो बेरोजगार समस्या नै हो ।
युवाहरुको अर्को समस्या भनेको कुलत तथा दुर्व्यसन हो । आज पनि हज्जारौँ युवाहरु कुलत तथा दूर्व्यसनको प्रत्यक्ष शिकार भएका छन् । उनीहरु धुम्रपान मद्यपान गर्दछन् । त्यस्तै उनीहरु विभिन्न लागु पदार्थहरुको प्रयोग गर्दछन् । सिरिन्च लगाउने ,चरेश खाने ,गाँजा खाने ,ट्याब्लेट खाने हिरोइन र अफिम खाने लगायतका कार्यहरुमा हाम्रा युवाहरु अग्रसर भएका छन् । यस्तै नेपाली युवाहरु मनमा कुविचार पालेर बसेका छन् ।उनीहरु विभिन्न अपराधिक गतिविधिमा पनि समावेश भएका छन् । हत्या ,हिंसा ,बलात्कार ,लुटपाट ,चोरी डकैति ,अपहरण जस्ता घटनामा समेत नेपाली युवाहरु मुछिन थालेका छन् ।
यस्तै, युवाहरुको अर्को समस्या भनेको साहस र आत्मविश्वासको कमी नै हो । किनकी चारैतिरको समस्यावाट ग्रस्त नेपाली युवाहरुमा साहस र आत्मविश्वास आउन पर्ने हो तर त्यसको वदलामा उनीहरु निराश र थकित हुन्छन् । साथै केही गर्न नपाएकोमा नसकेकोमा उनीहरु दुखित हुन्छन् र हिम्मत हार्दछन् ।
यी यस्ता धेरै समस्याहरुको कारण पनि युवाहरु कुलतमा फँस्ने गरको देखिएको छ । युवाहरुका धेरै समस्याको चर्चा गरेर मात्र हुँदैन समस्याको समाधानका उपायहरुलाई पनि हामीले अवलम्वन गर्न पर्दछ । यी समस्याहरुलाई समाधानको निम्ती र कुलतबाट युवाहरुलाई बचाइराख्न कम्तिमा बहुप्राविधिक तथा बहुआयामिक शिक्षाको स्थापना, रोजगारीको अबस्था सिर्जना, कूलत , कूविचार र दुर्व्यसनवाट टाढा, साहस तथा आत्मबलमा बृद्वि मन्त्रलाई अबलम्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपाली युवाहरुले सयौँ चुनौतिका सामना गर्न परेको कुरा ध्रुवसत्य कुरा हो । उनीहरुले अनगिन्ती समस्या भोग्न परेको कुरा पनि यथार्थ हो । अब प्रत्येक युवा सचेत हुने बेला आएको छ । आफ्नो अधिकार पाउन आवाज उठाउने बेला आएको छ । आफूले आफ्नो राष्ट्रप्रति पूरा गर्न पर्ने दायित्वलाई सगौरव पूरा गर्न पर्ने बेला भएको छ । आफ्नो समस्या केहो र यसका समाधानका उपायहरु के के हुन् भनी तिनलाई छुट्टयाउन सक्ने खुवीको आवश्यकता छ ।
त्यतिले मात्र पुग्दैन आएका भयकंर डरलाग्दा समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेम चिन्तनन मनन गर्दै अगाडि बढ्ने क्षमताको पनि खाँचो छ । यो राष्ट्र मेरो हो ,राष्ट्रको लागि मैले केही गर्न पर्दछ भन्ने भावनाको पनि विकास हुन पर्छ । आफूले के अधिकार पाएको छु र त्यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्न पर्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्न पर्दछ । सधैँ आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा आफ्नो सँग सँगै देशको समेत विकास सम्भव छ ।
(विभिन्न व्यक्तित्वको विचारधारा र विचारमा आधारित हुँदै वर्तमान परिपस्थितिलाई औल्याउन कानुन विषयका विद्यार्थी अजय बरबरिया (यादव) (बिए. एल.एल.बी) ले आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।)
अजय बरबरिया (यादव) (बिए. एल.एल.बी)
काठमान्डौं, स्कूल अफ ल
गाउँपालिका अध्यक्ष 'मुखिया' पदबाट निलम्बन हुने ?